DJI enweelarị mmiri ọhụrụ ọhụụ ma ọ bụ ihe ngosi: DJI Mavic Pro | Akụkọ akụrụngwa
Ọhụrụ DJI Mavic Pro Ọ bụ n'ezie mmiri nke onye ọ bụla n'ime anyị ga-achọ inwe oge dị mma na-efe efe yana karịa ihe niile ịdekọ eserese site na ikuku. Mmiri a abụghị ihe egwuregwu ụmụaka, ebe ọ bụ na DJI na-enwekarị ngwaahịa ọkachamara na oge a na ngosi nke DJI Mavic Pro ahapụwo onye ọ bụla ka ọnụ ya meghee n'ihi nha na ibu ya, mana karịa ihe niile n'ihi arụmọrụ ya. anyị n'ihe banyere ndekọ vidiyo, na-ese foto na ịdị mfe nke njikwa iji mee ka ọ fee.
Obi abụọ adịghị ya na anyị na-eche ihu otu n'ime drones kachasị mma (ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kacha mma) anyị nwere taa na ahịa na nke ahụ bụ na nnọchi nke DJI Phantom 4, ahapụghị onye ọ bụla enweghị mmasị. Ihe anwansi ohuru a bu ihe eji eme ya ma na "ogwe aka" na ndi rotors ka ha wefee ya ebe obula anyi jere dekọọ vidiyo na 4K (30 FPS) na 1080p (120 Fps), na nke kacha nta elekwasị anya nke dị mita 0.5. Na mgbakwunye, ọ na - enye gị ohere ịdekọ vidiyo na usoro eserese site na ntụgharị igwefoto na 12 MP ịse foto na usoro RAW nwere nkwụnye nkwụnye axis atọ.
Ọsọ o nwere ike nweta yiri nke ọgbọ gara aga na esịmde ihe ruru 65 km / h ma ọ nwere ezigbo ihe mmetụta dị ike iji kwado ụgbọ elu ahụ, chọpụta ihe ma ghara ịdaba, soro ihe ndị na-agagharị na-enweghị iji tracker ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, ọ nwere ike ịlaghachi n'ụlọ na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na batrị na-agbada ma ọ bụ bụrụ na enweghị njikọ nke njikwa na ọtụtụ ozi ị nwere ike ịchọta na emeputa website.
Enwere ike itinye ngwaọrụ mkpanaka ahụ na njikwa iji hụ mgbe niile ihe igwefoto na-edekọ ma were foto ndị dị egwu, ọ dị obere karịa nke gara aga Phantom 4, anyị nwere DJI Goggles dịnụ nke na-enye anyị ohere ịhụ igwefoto na mbụ mgbe ọ na-efe efe, wdg. Nanị ihe ọjọọ banyere ụdị ọkachamara a bụ ihe ọnụ ahịa ya, Nke a DJI Ime Anwansi Pro na-akwụ ụgwọ na Europe 1199 euro gụnyere mbupu. Anyị anaghị achọ ịnwale ya ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » DJI enweelarị ọhụụ ọhụrụ ma ọ dị egwu: DJI Mavic Pro
Ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ nke Xiaomi bụ inwe ụlọ ahịa anụ ahụ 1.000 na afọ 4 sochirinụ